Passenger Counter / MDVR Vagadziri & Vatengesi - China Passenger Counter / MDVR Fekitori
MRB otomatiki mutyairi pabhasi HPC168
HPC168 ndeye otomatiki yevatakuri kuverenga system yakatsaurirwa Bhazi. Mazhinji emakambani edu evatakuri zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu yevatakuri counter. Iyo HPC168 yevatakuri counter ine yakavakirwa-muHuawei yakatsaurirwa vhidhiyo yepamusoro-yekuita processor, uye inoshandisa iyo yakakurisa yakagadziridzwa mbiri-kamera yakadzika algorithm modhi kuti iwane simba rekuona muchinjikwa-chikamu, iye ...
Mazhinji evatakuri vedu vekuverenga system zvigadzirwa zvepamutemo. Kuti tidzivise kubiridzira, hatina kuisa zvakawandisa pawebhusaiti. Unogona kutaura nevashandi vedu vekutengesa kuti vakutumire rumwe ruzivo rwakadzama nezve yedu yekuverenga yevatakuri system. HPC088 mutyairi kuverenga system ndeye yakakwira-chaiyo (98% +) yevatakuri yekuverenga chigadzirwa chebhazi mutyairi otomatiki kuverenga zvichibva pane binocular stereo yekuona tekinoroji uye nehungwaru vhidhiyo yekuongorora tekinoroji. Iyo binocular kamera yemupfuuri co ...
MRB Mobile DVR yemotokari
Yedu mobile dvr ine patents ina. Kuti tidzivise kuteedzerwa nevamwe vagadziri, isu tinongoisa chikamu chidiki cheruzivo pane webhusaiti. Ndokumbirawo ubate vatengesi vedu uye isu tinokutumira iwe rumwe ruzivo rwakadzama. Mobile dvr imhando yedhijitari vhidhiyo yekurekodha michina yekutarisa. Mobile dvr inonyanya kushandiswa kumabhazi marefu-kure, emabhazi emumadhorobha, zvitima, subway light njanji uye zvimwe zvifambiso zveveruzhinji, mukuchengetedza kwevanhu, kuchengetedza moto, manejimendi manejimendi kutevedzera mutemo vehicl ...
MRB Vehicle kamera ye mobile DVR
Yedu mota cctv ine patent ina. Kuti tidzivise kuteedzerwa nevamwe vagadziri, isu tinongoisa chikamu chidiki cheruzivo pane webhusaiti. Ndokumbirawo ubate vatengesi vedu uye isu tinokutumira iwe rumwe ruzivo rwakadzama. Vehicle cctv kamera maficha: (MCD001 179 °) AHD yakakwira-tsananguro yemufananidzo sensor, yakakwira-tsananguro yemhando yepamusoro, resolution inoshanda ye 1920 * 1080. Ultra yakafara kona chaiyo: Diagonal 201, yakatwasuka 182 madhigirii, yakatwasuka 126 madhigirii. Vehicle cctv kamera Dzidziso dzidziso ...